«Omeo anay anio…» | NewsMada
«Omeo anay anio…»
Par Taratra sur 24/11/2016
Mpivavaka ny Malagasy… Tsy misy Malagasy tsy manolotra ny fiainany ho an’Andriamanitra. Saingy naha samihafa azy ankehitriny ny fahatahorana ilay Andriamanitra tokony hatahorana. Tsy vaovao aminy io mivavaka sy matahotra an’Andriamanitra io! Tsy resahina lava ny fahasamihafan’ny finoana fa manitatra lavitra ny adihevitra. Dia… fivavaky ny Malagasy mandrakariva ilay hoe: “omeo anay anio ny hanina sahaza ho anay”. Aleo atao hoe ny ankabeazany, mba tsy hilazana hoe ny Malagasy rehetra tsivakivolo.
Mahasanganehana sy mahavalalanina anefa fa toa ahafahana milaza hoe “tsy tena mivavaka tokoa ve ny Malagasy” matoa mbola misy izao “hanina tsy sahaza” rehetra izao? Tsy ampy ve ny finoana enti-mangataka sa ny mpanome mihitsy, sanatria, no manao bemarenina? Raha mivavaka ny “omeo anay anio” izy, tsy izany ny zava-mitranga. Hanina sahaza ny rehetra ve ny fitohanan’ny fifamoivoizana lavareny, na teo aza ny fanapahan-kevitra hampiato fampianarana noho izao Frankofonia izao, farafaharatsiny, hampihena ny firotorotony isan’andro vaky?
Raha ventesiny ny hoe “omeo anay anio”, hazakazaka arahin-tosika koa ny fifanenjehana sy fifandosirana amin’ny tompon’andraikitra, ho an’ny mpivarotra etsy Analakely, nefa izay ilay “hanina sahaza” azy ireo. Nahoana raha mba hasiana “hanina sahaza” kokoa hamahana ny olana efa tafalentika lalina amin’ny tsy fanarahan-dalàna? Fa hanina sahaza ihany koa anie ilay fanjakana bemarenina amin’ny olana sosialy iainan’ny vahoaka e! “Sahaza tokoa” satria tsy nisy fampahafantarana, na siosiony aza, ny vola nolanina amin’izao fandraisantsika “fety makotrokotroka” izao. Efa lasa “hanina sahaza” ny mpitondra io fanaovana zavatra an-tsokosoko io. Handaniana hatramin’ny roa hetsy ariary ny mpivahiny iray hasaina ho voky, eny Iavoloha, amin’ny alahady, fa “sahaza azy” ireo izany, na faraidiny amin’ny fahantrana aza ny 92%-n’ny Malagasy!
Dia… handany ny lalàna hanolorana fiara tsy mataho-dalana ho azy koa ny solombavambahoaka, anio. Sanatria tsy ho lany ve? Inoana fa “hanina sahaza” azy ireo koa ny fiara tsy mataho-dalana takiny, tahaka ny fananan’ny rafitra mpanatanteraka fiara mirentirenty! Andriamanitro o! “Omeo anay anio ny hanina sahaza ho anay ary… manafaha anay amin’ny ratsy”!